Guba waxaa isweydaarsaday labiyo toban gabyaa, magacyadooduna -waa habka gabayadu isugu xigaane-waa sida hoos ku qoran:
1. Cali-Dhuux Aadan 2. Qamaan Bulxan 3. Maxamed Fiin 4. Buraale Cali Ubaxle5. Ismaaciil Mire 6. Cilmi Carab Cabdi 7. Salaan Carrabey8. Ismaaciil Cigaal Bullaale 9. Xaaji Khaliif Aw-Axmed 10. Xuseen Hudle11. Maxamed Cumar Dage12. Samatar Baxnaan
Waa suuraggal in gabayada Guba ee halkan ku daabacanay wax ka dhiman yihiin oo intaa eeyan ku dhammayn, amain maansayahanno ka qaybqaatay la xusinnin.Labaatankakan gabay, waxaa uruuriyey oo giraan kudabye. Waxaa giraantaay ku duubnaayeen gabayadu ka qoray Maxamed Ismaaciil "Bari-Bari", 1991.Silsiladda Guba, waxaa bilaabay Cali-Dhuux Aadan ooHarti, Dhulbahante ahaa. Ceel ceelasha Doollood ka midah oo “Cammuud“ la yiraahdo ayuu hal (geel) geeyey.Waxaa halkaa ka cabbayay niman Habar Yoonis ahaa. Sidala sheegay, hashii baa loo waraabin waayay. Dacdii ayuuneefkii geela ahaa ku sii daayay. Intay faruurdhabatayayay iska dhaqaaqday.Dabadeed Cali-Dhuux, isagoo Cartan, waa hashamagaceedee, ku halqabsanaya oo la hadlaya ayuutiriyey tixahakan soo socda:
Cartaneey Cammuud layska qaad, ceelki Reer MaganeHadday curaddadii noolyihiin, waad Cabbi lahaydeNimankii ku caawiyi jiraan, cidi ka noolayneCabdullaahi iyo Yuusuf baa, ciidda hoos marayeBeddel baa cashiiro u xigoo, waa cuq dabadeedeRaggii calanku saarnaan jiriyo, Caliba loo diidyeNiman baaba Caarshe u noqdiyo, Caamir oo kala'eMarkuu Haybe sidii coomir degey, looga soo cararyeMa la cawryi Reer Yuusuf waa, cirir Ogaadeene, Miduu caayo miduu cayriyiyo, miduu carjaameeyoSaddexdaa calaamuu ka la cawryi, cuurahool Reyqadayuu kaadnqaye, haqyo lahoole iqadahoola, baqadahoole, haqadahool Reer Dalsoa taheye, haqadahool Reer Dalsoa taheye, haqadahoola iqadahool Baalsoa tahool, haqadahool Reer dalsoa tahoole, haqanaki rebaa !
Goorey muddo ka soo wareegatay, wuxuu Cali-Dhuux Aadanraaciyay gabay ah: "Doqonkii Ogaadeen ahaa, Doollo lagaqaadye". Tixdaasna, waxay furtay Silsiladdii GabayadiiSaddexgeesoodka Ahaa ee GUBA.
Doqonkii Ogaadeen ahaa, Doollo laga qaadyeLoo diid Dannood iyo hadduu, degi lahaa CiideNiman baa dalkoodiyo xukuma, labadi daaroodeDaratoole iyo Faafan oo, wada duraabaayaDeegaanta haradii, ku taal, daahaqi.
Markii duraha jiilaal Kacee, doogga la idleeyoDuurka iyo Dayada Hawd markay, Debec ku soo oontoLaaskuu ku dalandoolli jirey, loogu degi waayeAlla Dawguduuddii Ward Army, kama durduuraaneDawadeedu waa Jeerinleey, ugu dul geeraareCeelkii biyaha diirranaa, Looma dawdebo'eDixda Qarandi Deer iyo Mataan, loo Dardari waayeDarar kagama maalaan Cammuud, diiqo iyo xooreMaantana dukaammaa la dhigay, degelki GaafooweDixda Reygareed iyo Gargaar, laysu dacareeyeDeyr baaba lagu meeriyoo, loo dabbaaldegaye.
Wardheer aan dagaal xumi ka dhicin, dig iyo baaruud ahDoox iyo Doh iyo Faafan waa, soo dalbanayaane Kuna dalaaqe naagihii inay, dib uga laabmayneIiddoorku suu damacsanaa, loo diyaafadiye, loo diaya dira, sounida duula sow sida Darwiishkii Isaaq, duub cad uma qaadan! Makaahiilku Dooy uma kaceen, degaya HiiraaneDaacuunku meeshuu ku layn, uma dalluumeeneDaal iyo hadhuudh kuma cuneen, Degelki Haarweyneki, Degelki Haarweyneki, welagay Duraii, maagadayo baiya; , duul ka soo qaxayeDooyiyo dabriyo weerar iyo, ma laha duullaaneNinnaba uunka kama dawladsana, Dir iyo DaaroodeIlaah baa dabkoodiyo nasakhay, danabbadoodiiyeDadka uguma liitaane'e way, diriri waayeene.
Afartaa sidii deleb la riday, maysu dabajoojey "Da’dii" aan ka qaadiyo miyaan, "Deelka" ka habawshay
Ma daleeyey deelqaafku waa, kaa dilaa gabayeDacwad kalena waa Reer Xirsiga, hal an dareensiiyey; Dadka waa la wada laynayee, waa u darraydeeneDubbihii ku dhacay wax Bih Ina-Cali, doogta waaaya laayedodaya da Aboodi Deyr iyo Afmeer, dixida GaaroodiReerahoodu maantay degeen, daawe lagu boobyeSidii galab dawaar loogu rogey, Deleb ma maalaaneIna-Raabbi waa tii la dilay, waana Reer DalaleDumar kuma sagootiyin kuwii, dahayan ugaeirk dyehei, dahan laye duirk.
Aniguba dubkaan uga nixiyo, diirka oogada’eMa damqado’e kii dad ugu xigay, waa durduriyaayeIlmo Dacarba duur bay indhaha, dubuq ka siiyeeneNimankii walaalkood durqumay, kama u dambaysiay dusiine .egdowegaq, kama u dambaysiine .egdiyqao
Nimaanse aabbihii danashyo dhalin, looma duurxulo'eDib baa looga yaabiyo inuu, kaaga sii daro'eDagaalkii Kilaas ugama rayn, duulki Reer SharaceDunta boqorka nimankii sitaye, duubi jirey shaalka dila, dirau jirey shaalka-dilane, dirau durau dila, doora, dura, dila bayu !
Afartaa sidii deleb la riday, maysu dabajoojey, “Da'dii“ aan ka qaadiyo miyaan, “Deelka“ ka habawshay, Ma daleeyey deelqaafku waa, kaa dilaa gabaye, Dacwad kalenaoonsa aniga iadgadaw, Ma sheegadawe qaatay Diin run ah daliilkii sharciga, yaan ka daalacayeDembi inaanu iga raacahayn, wax u daliilkiiya: Daahyaale geelii la helay, waa kan Dayr dhalayeDuudweyn ma jiro Haamo iyo, dabo Cadaadeerhai Daamo iyo, dabo Cadaadeerhai daamo iyoarechi, durmaayurhai, daamo iyoarechi, dabo Cadaadeerhai Daamo iyoare durma, durmanderrin iyoare durma, dabo, durma, derrad iyoarea, dabo, durman, tadle derrad iyoarechi, dabo, durma, durman, Daamo iyo ma foga, DalawadiinniiyeDambarkiisu waydiin uraa, waana dabataane, Iyadoo dildilihii bishiyo, dacashii haaneed lehOo wada dunuunucahayuu, idin dul joogaayeDubuxul baaba lagu sii wadaa, dararti Baarjeexe.
Afartaa sidii deleb la riday, maysu dabajoojey, "Da'dii" aan ka qaadiyo miyaan, "Deelka" ka habawshay, Ma daleeyey deelqaafku waa, kaa dilaa gabaye, Dacwad kalena waa aniga niga iyo dabeeshaaseDersinkii wax qaatuu la'yahay, deynki godobeedeDaa'iradu maantay waddaa, duulashii galayeXaqa daguugmay duunyada la dhacay, dumarka ooyaaya, Naagaha ilmada duugayee, diilalyadu haysoDaa'imo haddaydaan ahayn, dagay xaqiinniiyeDagaalna waan jeclaa xaajo aad, dib ugu aydaane, Doqonyahay ka kaca meeshan aad, dacayda laallaadin!
Cali-Dhuux Aadan [Dhulbahante]
Caliyow dabuubtaada gabay, Daa’inkaa wadayeDabaylaha xagaagii dhaciyo, daafigaa sidayeNoo dooji dooggiyo sidii, Dirirka CawleedeDiirkiyo laftuu xulay hadduu, hadal wax daawayneDadkana uma sinnee reer tol.
Anna waa ku diirsaday Ilaah, derajo siiyooweDaaraan garbaha qoon ku laad, damaqday DhuuxooweDibirrooti buu dhacay raggaad, dabaqadayseeneWaa gobol dillaacid iyo CIIL, dibinta ruugaayaIyo gobol runduda oo fadhiya, dagagga weeyaaneDib u joogso waan kula dacwiyi, doodna waan celine! Dab baad ololisaa Kumana Gubo, daayin abidkaayeIntaad dogob shiddaa baad taqaan, diradirayn jaaneDaaskaad fadhido sow gubee, degelka qiiqaabi! Haddayse daacad xaajadu Tahaan, lagu dambaabaynninDambaaburada Naareed haddaan, dhinacu dooneynninWar seeddow maxaad noogu digan, waa daqarku kiinne? Goormeyse degmadu noo miirin, dawgal baa jira'e? Dardarsiga danaasaca la mood, dowr inaan ahayeIs dalleemintaydaa ninkii, dagani eedaayeDubbihii ku dhacay dhinac Barwaaq, degi ad maysaaneDaadduunka cayreed raggaa, dibadda meeraayaDocmo iyo Hartaaaaa, lagu ogaurene, dalhiiyoodhii, docmo iyo Hartaa, lagu ogaurene, dalhiiyuoodii, nemaa daniyuaga, nemaa daniyuya, daadhiyuoodii, nemaa duri dui-dairy
Anna waxaan dibbiray waa dagaag, deyro soo xulayeNimay gacantu daabbulo tiqiin, deri hadduu daayoOo yare dalleensado IntII, docosan loo yeeloDamban maayo waagay xubnuhu, yare dubaaxshaaneInaad daysid beel dagan adaan, dani ku seeteynnin, Dabcigeedba yaa Kugu yiqiin, digasho mooyaane? Hadday debecdo waw hiilisaa , doqon walaalkeedeDiiftiyo ushay garan intaad, dayada haysaane, Dunna haddaadan ii tarin maxaad, iigu dano sheegan? Duunyada fardood maalintaad, Deleb ku qaadaysaySidii duul Amxaaro ah markaad, nagu? Daabaca ninkii kugu dhuftee, daabka kuu celiyeyIyo kii “duleedshaay!“ Ku yidhi, wax isma doorshaane, Dakanadayda yaa kaa xigaad, igu danayn haatan? Aar soo dibjiraya neefiy hadduu, da kanacuftii geliyo hadduu, da kanacuftii, neefiy hadduu, da kanacuftii, kahaa kahai kiii kahai kiii kahai kahai kiii kahai kiii kahai kahai kahai kahai kahai kahai ka da hadha maaha! Aday dilaye goormuu Isaaq, Doollo iga qaaday? Maxaa libinta Daarood lahaa, Dabacayuun siiyey? Hadday Dubuxul uga heesayaan, dacarna waan siineMa wayse haatan daab iyo ul, kaga cabbaan dawlis? Bulsho Daalis oo dibi dhaloon, loo dambarineynninOo kii lahaa diiday bay, sidigtu doontaayo, kuwaan! doonnan dadabtaan dhisniyo, xidid dariiqayntaKuwaan dahannay diricay dhaleen, waa dareemada'eMuslinka haygu didin yaan Iblays, dowyo kaa ridine!
Darka Jabay dullaalkiyo dhulkuu, dadabku meeraayoDeeqaa Ilaahay halkuu, xuliyey daadkiisaWar ii daa dugaag iyo Hartay, igaga deyraane! Iiddoorse you weeyee hadduu, duullan soo bixiyoDunji Habar Magaadluhu hadduu, dabarka soo gooyoDunbuq iyo rasaastana hadduu, Debecsanow siiyo, Horta yaa la da'a Wayla yaab, dawyadaad mariye?
Ogaadeen ka daan iyo ka daan, Doollo soo gudubyeDiinkaan akhriyey way imaan, Dooy raggii jirayeDunji maalintaa waxaad qabtaan, waan u daahirineMa dammaniye daynkayga waa dark, na dabaggelaada, the dauorkayga waa dark, na dabaggelaada, the dauorkayga, kaydaa, kaydaa, kayda, kaydinkaya, dabaggelaada, the dauorkaya laii qabnaa, daawashiyo ceebe! Caliyow da'daan ahay waqaa, looma duurxulo'eDuq gaboobey iyo wiil yar baa, loo dedaa hadaleDiirkaan ka garan xaajadaad, dabaqa saarteene, dabaqa kaarteeneMaylia dumaalo naaguhola waholla'u'a da, hutsaia dumaalo, naaguhola wala'a'a, hualka, Ialka, nashola, ninkaya, halkaa, doors derejo siin waayeDalkaad Ina-Adeerkaa dhigtaad, weli degeysaaye.
Baadida nin baa kula daydaya, daalna kaa badaneAan doonihayn inaad heshaa, daa’in abidkaayeDadkuna moodi duul wada dhashaan, wax u dahsoonayneDallo ma laha Aakhiro haddii, loo kitaab dayo’e.
Dullaal iyo mallaal wuxuba waa, Carabta deyntoodeDibnihiinna uun baan galoo, way duddubiseene, Allay diliye Iiddoor adaa, iiga sii darane!
Calow gugakan gabaygaad tidhi, gocasho weyn reebyeWixii gacal ahaa uumiyaa, waa kala mid geyneGabadh iyo walaalkeedba waa kala geddoomeeneGardarriyo is yeelyeel mar buu, gubey bilaadkiiyeNin garaad leh baan Kugu ogaa, Gaban ahaantiiyeMaantaad gu'yaal badan jirtoo, guudku ku caddaadayBal garwaaqso warankaad gantiyo, gedaha aad joogtid!
Guntigii wadaadkii la eed, gebagabayntiiseGalow baa ka ciyey ceelashaad, geesi ku ahaydeBuuhoodle geel Looma Horin, goorti dabadeedeGammaankii badnaa ugama Fulo, labada geesoodeGarmaaddii shubaysiyo la waa, garabyo weyntiiyeGeedaha ka baxay laga ma cuno, godobyo dhowdhooweGod abaaday waakaa noqdiyo, guri madoobaadeWaxa guuldarrada ugu wacnaa, geli colaadeede.
Waa gaasir Reer-Cali wuxuu, wada gudboonaayeMa gu 'yaree see Cali tashigu, uga gulaallaaday? Guhaad laguma falo ruux hadday, gogoshu kuu taalleGaadiid ku qaadiyo haddaad, gelin lixaad hasa kuedhi gabau, gelin lixaad, kuedhi gaba, ira ira, shaadi, kuedhi gabaur, shaedhi, shuedhi, shuedhi, shuedhi, sha, ira, sha, ira, shuedhi, gulaalla yahaye.
Afartaa gammuuraye sidii, leebka ma u gooyey Gobo ’kalena waa erey yar aan, godob ka faalleeyey.
Gondaggooye nimankii dhigaad, gacal ahaydeeneCabdi Muxumud gabannuu ka tegey, goloshki dheeraayeGeyr iyo waxay caro qabaan, garanba maysaaneAar soo gendoodsaday wuxuu, gaaro waa diliyeGoonyaha haddii.
Geelii Ogaadeen ninkii, goofiyaa tahayeGiddiga Reer Subeer yahay ninkii, gaaray baad tahayeNinkii geed ku xidhay baad ahayd, galabti weyshiiyeGudaha Adari waa laga tirshaa, gabayadaadiiye.
Gaal iyo Islaan nabaddu waw, gogol nasteexaadeMarse haddii colaad loo guntado, Goray ma laacdeeneCid uun baa rasaas kugu gambiyi, Giibba ma lahayne.
Ogaadeenku waa gama’san yahay, gamasyo haw dhiibin! Godobta ha ogeysiin rag waa, garacyo Sheyddaane! Gacalow ka joog meelahaad, gacantogaalaysay! Haddii kale aduun baw go’iye, gabayga aashaada!
Maxamed Fiin [Habar Yoonis]
Nimanyahow rag geeri u batoo, lagu gablaynaayoAnaa ganiyo anigaa gembiyey, goor kastaba joogtaOo lagu gartaatacahayoo, gibil madoobaadayOo loo gashaday baal sidii, gaalannimo roontaOo lagu lagu garrami, way geo yayo gooe yada, Oadayo gooe, Oyayo gooen goosan kara qaantiGabaggabadii Daahyaale iyo, gabaygi loo jeedshaySow inuu geddiyo haatan Cali, lama gudboonaannin! Hadalka waa gaftaye Maxamedow, kuuma soo geline! Markii farasku kula gaabiyee, gaba hada maya gahada, cala daa gamada, gamana gamadaa, loantaa gamaya, gaantarayi gabaygu sow maaha? Cawl baa midgaan soo gardiyay, soo gabraar tegayeIsagaan wax lagu gowriciyo, geerisaba haysanJeeniga gibsiiyoo middida, qodatay gaareeyeAdiguna geddii baad tahayo, ways gunaanadiye magazyo asyo yaqara giufaan, ways gunaanadiyeXa yaqara giufigata , Guba la xeer maaha? Garta qaybi oo had iyo goor, genefka uun taa giOo gowrac kaa mudan asaad, gacal walaalaysayOo gogosha kaa kicini waa, sida Gumbuurkeere, Guntigii la furay haatan sow, lama garwaaxaydsan! Labadeenna gobol xaajadeer, la isku guubaabshay, la isku guubaabshay cadayaan gunno in gunno, la isku guubaabshay cadayin oan gunno, la isku guubaabshay cadayin gunno, la isku guubaabshay WalHaddayin gunno, la isku guubaabshay harin sheegin!
Dhankaan ka hadlay waakaa Qamaan, dhaafay hadalkiiyeDhex-xirka hayska gooyaan lahaa, dhuugga loo tolayeHaddii dhaxal adoogaa la cuno, waa dhadhamisaayeWaxaan cunaha ii dhaafin iyo, dhaashin baa jira’e.
Naagahaan dhankii loo rogiyo, dhinacna diidayneDheddigoodshahaa lagu arkiyo, dhiigga caadada’eHaddeeyan dhiilka caanaha lahayn, laguma dhaarteene.
Wax ka dhigan gobtii dhawrsataan, CEEB ka dhiidhiyineNin dharbaaxo quudheed dugsaday, dhaqayadeed maalye, Dhashaaday sugtaa xaajadaad, dhawrataa abideDhirfal buu Isaaq marin intuu, dhaco OgaadeeneKaruur dhuumay dhaydana ka jecel, oo ay dhamayaaneDhoobada Hargeysiyo Berbera, waa Dhito u taalleDharka kama macaasheen hadday, dhuunta jarayaaneWaa dhego la'yahay Reer Subeer, dhoohan weligiiseDhibta gaadha waa moog yihiin, iyo dhaliishoodeAnuun baa dhalaalinahayee, dhiirran ma hayaane.
Intaan dhalasho waa yaab qabtaa, dhab ugu soo ooyeyDhaladuu wax iga saaray culus, dhabalna ii raacyeDhudhunna waaba ii sheegtay adag, dhiillo i gelisiiDhawaaqayga kuma faaraxine, waa ka dhiidhiyaye.
Waayeelka dhaylada sitee, dhawrta ku ilaashaKuwaa dhebedda soo xiranayee, dhuuni kale haysanOo dharabta jeexjeexan Qaba, waad la dhalateeneDhafoorkaa ma yeesheen har Galay, dhogor xumaantaaseDhoomaha Isaaq raranayee, Dhaayin laga keenayDharkaa lagu qasaashaa intay, dhereg u daadshaaneRag baa caanahaad dhami jirteen, dhiil u hoorsadaye.
Afartaasi waa dhaabad gabay, iyo dhextaashiise, Hadallo dhagaxyo waaweyn ka culus, waa dhug siin jiraye, Maansada dheh uun lama yiraa, waygu soo dhacaye, Dhugaheeda layskuma qabtee, dhibic kalaan goa kayaa, dhibic kalaan saanux karaa, Dhibic kalaan saanux karaa, Dhibic kalaan baanmaa, Dhinulari karaan dhergaye, dhidibka kuu qaaday? Dhaawucu ninkuu ku cusub yahay, dhiigga farahiisaOo shalayto kaa dhaansadaa, Dhuurre kula yaalleWaakaa xeryaha Looga dhigay, Dhogor IdiinleeyeDhaqaalaynna mayside naftaad, kala dharroocdeeneLibintiinnu maantay dhowdahay, kuma dhaqaaqdaaneCar ku dhaca haddaad dhalad Tahoo, dhuubka Boqor hayso! Afartaasi waa dhaabad gabay, iyo dhextaashiise, Hadallo dhagaxyo waaweyn ka culus, waa dhug siin jiraye, Maansada dheh uun lama yiraa, waygu soo dhacaye, Dhugaheeda layskuma qabtee, dhibic kalakian baanay, dhibic kalakian baanay, dhibic kalakian baanay, dhibic kalakarian baanay, dhibic jadawa-karian baanay, dhibic kalakian baanay, dhibic kalakian baanay, dhibic kalakian baanay, dhibic kalakian baanay, Ugaas Magan wamohaaqi ! Cabdille Aadankii dhaadan jiray, dhab u ogeysiiya! Uga dhoofsha Dhicis Muuse Khalaf, oo dhabta u saara! Cawly ahanka dhaantaynayiyo, Dhugadna gaarsiiyaIsaxaaqa dhooshiisii ​​Hanay, dhababkacna loo diidyeNimankii ku dhabannaanin jiray, dhowr ka soo loogsada'eDharbaaxooyinkii ceshiyo, dhabarjabkaagiiyeWaataa hablaha Ciise Dhamal, dhigaha laayeene, Kacoo dhididka rida waa intaad, dhimanba weydaane! Dhambaal lala ma yaaciyo waraaq, sida Dhabiileede "Hoo dhagaxa qaad iyo adeeg! ", gaaladaa dhihiyeRaacdadu hadday kaa dhab tahay, Dhebi dagaalkeeduAdoo dhididsan baa loo ridaa, dhamac rasaaseedeRaggaan dhibiyey waa kaa dhacsadoga, dhebacaya tahay!
Cali-Dhuux Aadan (Dhulbahante)
Dacwigii Qamaan yidhi anaan, danabku ii sheeginMa doonayn inaan gabayo diro, amase diiqaayeMarkaanse “daa!“ Iraahdaba rag baa, dawga jiifsada’e.
Waa iga da'weyn yahay ninkaa, dirirta oogaaya, Cali Dhuux sidaasuu damcaye, diida hadalkiisa! Haddii aqal dab galo aan ninkii, daaha laga saarinDherigaan dalooshimo lahayn, baa dubkii hariye, diida dubkii hariye, Cali Dhuux sabad ahoo, diradireeyaayeHadday nimanku soo wada degeen, nabad ha loo daayo! Ilma-Dacarka duufkiyo bakhtiga, dibad u meeraayaHurre Raabbigaan dunidatan aan, diric u dhaafaynninMaxaaauxuya, dubaia dubaia, dubaiumabaya, kuaiuma, dinkiia, oeno, ouqadaye, kuqa, deeya, ouqadaye, kuqaio ka dhigay, dawggal baa jira'e?
Buraale Cali Ubaxle [Ogaadeen]
Dan u baxay Ogaadeen hadduu, duudsi qaayibayeDirirsiiyey diidana inay, duul ka nixiyaaneAnigii dagaallaminahayey, igu dabreeyeeneDuullaanna way soo baxsheen, sida Daraawiishe.
Daabaca raggaa lagu dhuftee, daabka lagu jiidayDaabaqad wajiga baw hadhiyo, diillin aan go'ine, Ma iyagaan dadkii ahayn iyo, duuddi Nebi Aadan! eWaase wuxu isaga daadsan yahay, doocna garanayne.
Dowdii ha darandoorriyeen, hana dagaajeeneDushana hawgu soo dhaamiyaan, dumarku haantiiyeDabinkii xumaa iyo sibraar, ha isku duubteeneDugsi dhaxan leh haw yuururaan, diilalyiyo ciileIntay haigaerte, waaweene.
Mar haddaanay daaqayn Walwaal, nimanku dooggeedaOo dibinta saarayn Wardheer, loona dacareeyayDanwadaag iyaba waannu nahay, downa wada naalle, Bal Iiddoor maxaa igu diroon, Doollo ugu sheegan!
Hooyaale gabay waayadeer, haabka kuma hayneIn dhoweydba waataan ka haray, himiladiisiiyeMa hawalinnin maansooyinkii, igu habboonaayeHoorri waliba goortuu tirshaan, daayay hadalkiise.
Hayeeshee xaluun baan hurdada, haatuf ii yimiyeQaar baa halleeyee haddaan, "Miinka" ka higgaadshoHeerkaan ka maansoonayaa, loo hanweyn yahayeIga Hooya waa Taad beryahan, ku holganaydeene! Hebednimadu waa waxay rag yari, kuu hunguriyayneHaddii aad halyey wada tihiin, hanad ahoo dhiirranNinna ma holliyeen xoolahaad , gacan ku haysaane.
Hubka iyo raggaba adiga oo, hodan ahoo buuxaHabaar weeye Habar Yoonis aad, hiil u dayataayeHaddii aadan hoollinayn dagaal, hebelna aad weydoHolgantoo naftaad geeridii, kala hawooteene.
Waase lama huraan mowd inaad, ka hor timaaddaaneHayin iyo anoo layga dhacay, halo an maalaayayIntuu Halab karuurkeed nin kale, dhamo ma hoydeeneAnoo hilib ugaadheed ku nool, kama hareen Xiise.
Idinkuna hablaad ugu darteen, hadiyaddoodiiyeHayiin iyo dayiin uumiyuhu, idinku haasowyeInaad hoos u wada foorartaan, helay khabaarkiiye.
Horweyntii la qaadiyo raggii, haanka lagu gooyayHaadkiyo waraabuhu ragguu, ka hirqadee laystayEe hanaqa ay wada jareen, hebelladii laayayHawo ineeyan kaa hayn inaad, wax u halaakays, aadicowaad hiftii, wax u halaakays, aadicow, Hartayo, Aaynano, Aaynano, Isanko, Hartan, Aankaya
Hayeeshee waxay kaa hayaan, wad ka helaysaayeNin hashiisii ​​laga qaaday oo, lagu hor maalaayoOo horin ka yari haysataa, sidan u hoomaayinOo waliba loo sii hanjabay, lana halaakeeyay.
Hawaar dhabba nin lagu soo dhuftoo, haylna laga jeexay "Ha’da" maanso kuuma ay furree, kaagu waa haboweHeeryada adaan rogin Qamaan, haanta lagu saaray, Hadalba kuuma yaallee maxaad, gabay ka hoodaamin?
Doolaabta maansada anaa, deeqsi ku ahaayeIn dhoweydba waataan dedoo, diiraddow rogayeHadba aniga oo daayay bay, igu danqaabaaneBal aan dayo dibnuhu waxay barteen, dihashadiisiiye.
Sidii dirirka rooboo bishuu, di'i lahaa joogaAma ramag diraacdii dhaloo, oon la dubayoobayOo maqasha laga duubayoo, ololka deexaanshayAma dowri aar oo in badan, duur cidla ahydaa waxa kaidla ahydaa waxa, kidla ahyda, damawada kidla ahyda, kayda, ka, ida, da, ka, ida, da, ka, idaci, da, ka, idaci, dairy geelayaga, loo dardaarweriyey, Dacwad kalena waa Cali hadduu, gabayga daynwaayay, Dacwad kalena waa aniga iyo, duun u hadalkayga; Dacwadaan ka idhi geelayaga, loo dardaarweriyanta, loo dardaarweriyanta; Iyadashi wahoaa, duDortolliyoo dhagimashi wahoaa, duDortolliyoo dhulabashi, dildaedhii si , dooggu ka idlaaye.
Darka Qarandi deexdii Cammuud, waa is noo xidhaneDixda Reygareed iyo Gargaar, waanan DAYN karineDumbuqyaaba Laga soo guriyo, dogobbo waaweyneAfarteeda deyr bay taqaan, Looga duulwado'eAnaa doonanaystaye Baqaa, Looga diirwarayeDawo hadday lahayd Jeerinleey, waa dul tegayaayeDegina maayo jeeraan furo ku, degelki Gaafoowe.
Daahyaale geelii la helay, waa diramayaayeDambarkiisa waxaan loogu lumin, amase loo daalin, Ninna nama daneeyeen haddii, lay daleelsado'eDeeq looma siin wiilashaan, Dayrta xoogsadayeDiishahatayne laga jara soo loo loogu aaMaba, daihaMaqa, daihatayne, daMaMaiqa, daqiradiyo, Daakiradiyo, daakiradiyo miihin? Mise doorkanaa xoog ka dhacay, duudda Habar Yoonis?
Afartaa ma dalandeellinnine, daw ma ku hagaajay, Ma daleeyey arartaydu waa, dahab sidiisiiye, Dacwad kalena waa Cali hadduu, gabayga daynwaayo; Nin da'yari dambaab iyo ha galo, diradirayntaaseDiintaq deebtaa ku yahay, waa digniin dhab ahe, Sidee baad dawaar ugu rogtaa, dunida geestaada? Ma dugaagga cunayaad tihiyo, haadka daba jooga? Mise derisnimaa kaaga dhiman, hadalkan deelqaafhexayo, hadalkan deelqaafhexayo, reu dacyo, reiDaara, audacyo, rei, daharhi, aooda, iyo Daari iyo diirkeedeMugga haatan dirir uumiyuhu, waa is dilayaaye.
Doqon iyo Ogaadeen haddaad, dala 'ku sheegaysoWaxaa daarahoodii kharribay, duulka Reer GorodeDunjiga Reer Subeer oo dhan baa, duudsi loo naqaye, Adaa dalawadoodii dhacay oo, ceeb ku daabananka diday oo, ceeb ku daabaya diday oo, ceeb ku daabaya twoay, ceeb ku daabaya twoay, ceeb ku daabaya twoay, baa wadra dwoay, baa wadra dwoay, bai wadana dwoad, baadana niday oo, bai wadana dwoad, baadana twoayeoo, bai wadana twoad, baadana twoayeoo, baadana nidayeoo, bai wadana dwo , Waa maxay baroordiiqdan aad, ugu danookhyeysey? Dadkaba haatan godob duug ah baad, ugu dahsoonaydeDuhurkaaba lagu toogan laa, Dayrtan maanta aheMa daguugan tahay sow ma ogurea, deynka idin jiodu gudeuya, deynka idin jiodan gudeuya, Iodatawan gudeua, Deynka idin jiodu gudeu Naftate, Iodatawan gudeuada, Idinka idin jiodu gude duqyaal iyo xidhxidhay, shiikhya daahira'eHalkii Aw-Xuseen lagu deldelay, waa dalluun qodaneDubbuhu Wuxu ku dhacay Bihini Cali, degelladoodiiyeKu daadduume Reer Carab sidaad, uga digsiiseeneDa'roontii kacdaba waydinkii, gooyey Reer Dalale, Sidaan lagu dareemeynnin baad, ugu damqaysaayeInaan nimanku diirdiirrannayn, waxaw daliilkiiya; Dooyaalkii baad tahaye maa, lagu daqiiqeeyo? Guutada markuu Macallin Doon, kula dawaafaayayA ad sida wadaad soo dikriyey, doobta karinaysayRaggaad “Qoora-dogoblow!“ lahayd, sida dameer weyd ahEe saca daloombiyay baqaha, daadshay qalabkiisaAnnagaa ku deyranne xigtana, ugama diirtauge, Haddaya duddana, docdoca, doc, ugamadii, Hubayadii, Hubaydana, Duddaya, Dumbaya, Duddoca, Duddaya, Duddoca.
Afartaa ma daldeelinnine, daw ma ku hagaajay, Ma daleeyey arartaydu waa, dahab sidiisiiye, Dacwad kalena waa aniga iyo, duun u hadalkayga; Deyn kale ma sheegine markay, diiftu kugu tiill timay lagio, aydabiday sidii waa fududdahee, dadab laguu heelay, Aan gabadh daruur u eg aroos, kuugu dalaq siiyay, Uu kuu dabbaaldegay qabiil, daabbad wada fuulayOo dun iyo shaal heensihii, laysku wadauuhay kayuuhii, laysku wada duubayy, doguumaru yuumaru, doguumari, laysku wada duubay, doguarbaume doguarka, doguaray, doguaray, doguaray, doguarbaume
Meeshaan abaal door ahoo, debecsan eegaayayHaddaad guuto noo soo duntoo, daabcadde u dhiibtayNabsi daalay baan kula sugiye, duugga bal an dhowro!
Ismaaciil Cigaal Bullaale [Habar Yoonis]
Dabkaad hurisay Cali Aadanow, dogobbadaad oogtay, Dambaaburada aad ololisiyo, dirirta guusheeda, Maandhow Daryarey noogu timid, dacawigaagiiye! Inkastoo dalkii kala fog yahay, hadalku sooidayo, dowirk duulyeDabeelha Xagaedee, dhooiy duulye.
Kumana diirsan maansadu hadday, dunida aafayneDuunkaaga kuma suubbanayn, diradiraaluuye, Allaylehe dembaab lama hadlee, kulama doonayne! Dalkoo nabad ah baad uumiyaha, belo la doontaayoiyaDal dhan buu gubaa qaraf la Doula hara.
Inkastoo diciif yahay naflaha, ama la daadduunshoInta daamankiisu is hayaan, anafo daynwaayeDeeq iyo markuu nabad heluu, daawo furayaaye.
Markii aan Daraawiish jirneed, nagu duqeyneyseyNama duufsan Shiikh Maxamedkii, duubka noo xidhayeAnnagaaba diintiyo sharciga, daalib ku ahayne.
Dammanaansho nimankaad biddaye, doqon ku sheegeyseyCawlkii la dabay oo middida, dabaxda loo waayayOo qoday birtii lagu dig dhabay, kuugu duurxula'e, Allaylehe dadkii kugu danniyay, waiad miada, derawaal kuailyay, waajey ​​miaya, derwaal kuahaye, Afinehaga, dawald -dhaclaysiiyey, Dubbahaan la dhacay sow finiin, kaga ma duulduulin! Dacwad kalena waan odhanayaa, bal an daliigeeyo; In Qamaan ka diday waan ognahay, diirnixii gabayeLaba dibi midkii baqan lagayaa, kagauiya dora dora dora, dooduiya garta, doodauiya garta, dooduiya garta, doodauiya garta, doodauiya dora dora dora dooduiya dora, dallicebiyadiii, dallicebiyadiii, dallicahaye .
Weligiiba dagaal kuma xerayn, Deleb OgaadeeneDalkaa nabad ahaan jiray markuu, daaddahayn jirayeDuqoodii horaa lagu ogaa, inu danqaataaye.
Iyadoo dildilihii bishiyo, dacashi haaneed lehOo awrku doobbinahayaa, Deleb ku qooqaayoDaahyaale geelii la helay, dalawadii meertayMarkii Dabafurkii laysku helay, lagu darbaysiiye.
Daya eeyda iyo qaalmihii, soo durdurinaayayEe doonka laga laynayiyo, dumarka ooyaayaDar-ku-rogidda goortii horweyn, laga durduuraayoSidii duul goboo shirey markay, wada dekeynaysoDig markay dayaa, “tidhaahdee."
Dab rasaas ah iyagoo sitey, dacas la jiifaaneDagaag magangelyo ah baannu nahay, daa’imaa odhaneXaqoodii hadday dabagalaan, kuma dambaabeene.
Afartaa ma daaldaalinee, daw ma ku hagaajay, Dadku muranyey wiilyahow miyaan, deri-dhaclaysiiyey, Dubbahaan la dhacay sow finiin, kaga ma duulduulin! Dacwad kalena waan odhanayaa, bal an daliigeoad, bal an daliigeoad, didqonti geya adha adhiadyaad, doqontigaa, O, doqontiguah , Doollo dhinaciisa? Oo dumar-la-moodkii lahaa, daacad ugu geysid?
Ismaaciil Mire Cilmi (Dhulbahante)
Daarood baan walaalayn lahaa, warasadiisiiyeWardheer baan lahaa hayska dego, sida WadaadkiiyeWacad baan u kala qaad lahaa, wadar ahaantoode.
Ciyoon baan ku weyrixi lahaa, weris OgaadeeneHa welwelin wargeli baan lahaa, way wahsanayaaneWaxtar baan lahaa inuu ku jiro, waxa ogeysiiye.
Iiddoor wagaashaan lahaa, webiga jeexsiiyeNimankii siday ugu wadeen, wiiqda kaga gooyeyWaraabihii cunayaan lahaa, ha iska waabsheene.
Wadaad shiikh ah weli daahiriyo, ma aha WeyteeneIyagaa werdiga hayn jirey oo, Waaxid ku ogaaye, Waaxaddii la dhacay xoolihii, wadarta loo qaadayIyo waarihii ay galeen, wiiqda la cunsiiyeyWeerkii.
Ceelkii Walwaaleed hashii, wahane loo diidayWadaamaha Cammuud baan lahaa, ha ugu waabsheene.
Wasiirtoodi hore yaa xumayd, waalidkii dhalayeWacdigayga kuma doogsan iyo, waanadaan idhiyeWahay wahe sidaan wax u dhimay bay, wig iska siiyeene! Nacasku waa i wiiqaye Isaaq, waanigii wadayeWaa kii waddada aan ku ridey, wagacda JiilaaleWaaxdaan ka toosinayay bay, iga wareemeeneWaatii wadnaha aan u Galay , sida WadaadkiiyeOo waalid xoortaan ogaa, wiish la caaridaye.
Ogaadeen hadhuudhkiyo sidii, hilibka loo boobyeInkastuu hundaha iyo u dego, webiga hoostiisaGeeluu habenenka u lahaa, looga hadhiwaaye.
Nin hamraday haldoorkiisu waa, lagu hamoodaayeHilqadliyo iyaba waa sitaan, halawle Maadhiine, Hadday kaga haq siiyaan rasaas, lagama haageene.
Nimankaan haraadkiyo aqoon, Hawdka mariddiisaKolay Habar Jecliyo Ciise tahay, waw handanayaaneNin waliba haruub buu toshiyo, haamo gooniya’e, Haweenkuna hadday doonayaan, inay hidiidaane.
Haadaaqsi gabay waayo dheer, haanso ma lahayneHiirtaanyadiisaan ku nacay, hibashadiisiiyeHawaalawarran mooyee si kale, wawga haayirayeGoortaan hammigi gaabsadaa, layla hiigsadaye.
Marka nin igu haabsado anoo, heli jawaabtiisaDhaaxaan mid hanaqaad is biday, soo hoggaan barayeTixdaan hiddiyo haaneedsigaan, hab ugu laayaayeHal-abuurka layguma higsado, soo horraan baxaye.
Hooyaalintaan kaga badshaa, haybad iyo luuqeHaasaasahaa laga gartaa, hagar la’aaneede, Marse haddaan hullaabta iska rogo, soo hankaabsadaye, Aan hawadiyo hoosada Burciyo, Herer ha geeyeene.
Kuma hiilo hoorriga fulaa, la handabeeyaayeAnse waxaan hagaag uga tirshaa, heel la ii wacayeInaan oday hangaafa ah noqdiyo, hayraf la i iyye, Hig ma siiyey hawraedarta way, kala haleeyaane, meaba daba jayna, meaba kayu kaba, mahu kaba jayoo, hejes hagaajay.
Afartaa “Ha'da“ intaan ka deyey, hilin ma qaadsiiyey, Caawana hiyiba waa hiyiye, hadal kalaan baanay; Halaq gudaya waw halis nimuu, boqon haleelaayeWaabaayo lama hiinsan karo hair, huurtay oo lama hiyoonhaow, huurtayo lama hoyoonye Wiyaga huurtayo huurtayo, so huurto lama haleo, huurtayo hiyado hiyado hiyado, huurtay, huurtay, huurtay oo lama haryoon uun baa maroodiga hunduda, haamahaw sida'eHayinnimo markii lagu arkay, hilayga saareene.
Hoobaaq mid waw ridi jiriyo, heego iyo roobeBaddoo huguntay hoorriga sabaha, lagu halaagmaayo, Bal maan hakiyo hir uu laacay baan, ku hafin doonaaye! Calow laguma helo geel sidaad, kudaanaysaane, kadaaalin, kudaanaysaane, kadaaalin, bui iunya holin lahaydeene.
Haruub daatay idinkaa ka qaday, habaqlihiisiiyeDabaq haadshihii laga hirqaday, ways hondo ogeyneWaa tii lagaa hirayy adoo, qaba hamuuntiiyeHuwan marag ah waatay ahayd, hadhacafti waabnaaye, waiddaya nayd, hadhacafti waabnaaye, waiddaya naga, ninetya naga, hawoanaga kawoa naga, haiddaya nara naga nara naga, haiddayu ka, hadeaya nara naga, Ha uga yaabaynninHaawaydu kama maaranteen, heeshigii dhalayeHaleelada ma daayeen nin cunay, hilib ugaadheede.
Haaraanka iyo faanka ways, la hiddaraacdeeneKun haddaad helaysiyo barbaar, halabsatoo fuushaQoluun baad u heensayn lahayd, hawl yaraan subaxe.
Heegaale kama qayliseen, holanka Jiilaale, Goortaan hadhkaba kaa eryaad, Hawd u cararteeneWaakaa hubkii sida raggii, wada hareednaaye.
Habarwaana waakaa hengelan, labadi haamoodeShirshooruhuna hoy ma leh kuwaad, hilib wadaagtaaneWaakaa hayaankii ku dhacay, Hoobiyiyo xeebe.
Ararsame ma haybsado Nugaal, hoorashada ceeleHannas iyo harraad kulul adoo, habaqle soo guurayCaynabo haruub kama dartaan, hogo kaliileedeKa huleele Hagar Aadankii, hooballayn jirayeAduun'haa lag hayaayda Afeyaa, Haaryana ka, Haaryana, Afeyana, Haaryana, Afeyana, "Haaryana", Haaryana, Afeyana, guntuane, "Haaryana" Caawana hiyiba waa hiyiye, hadal kalaan baanay; Habar Yoonis waataa hantiday, haradi CiideedeImminkay Hundiyo reer fureen, haradi Ceel FuudeIn Hutuuti khaylida la dhigay, Himidhna loo geeyeKu hungow colkay humin jireen,.
Waxa Ammaadin webigaw hirdiyey, harabku waa khoofeHuurkii Shabeelluu galoo, whore bannaankiiyeHoobhoobsigii lagu idlee, horinti JeeraareNimankii hawada weyn lahaa, haatan lagu leefye.
Haaruufka Dalal bawga dhiman, hegerbi DaaroodeHeydaaro cadow looma tudho, heermay boqontiiyeMaantana hablaha loo dhisay bay, la hamranaayaane.
Ma hambayne dunidii hantiyay, tan iyo HiiraaneHaadaa qabiilnimo Isaaq, hibo Ilaah siiyeAniguna halkaad degi jirtaan, ka hawisaayaayeHadba waxa ku soo gocan sidaan, kuu harraatiyaye.
Hebednimada qaarkeed aday, kuu hed noqotaaye, Waataad haween nagu xustaye, haad ma ku cunsiiyey! Dabadeedna hoog iyo hungiyo, ciil ma la huleeshey! Tolkaa baa horweyn ku ahaaal, haanta loo ku ahaaala, haanta loo culayeWaoyakaa hortigare dh Hortigare e.
Humbannida Ogaadeen intaad, soo hirgelinaysoHabqankii firdhaday Gorod Xirsaa, caydh hadaadumayeIyagaa hiraabtiyo kallaha, hiirta waabberiyeHaddaad ficil hinaasiday Asaad, hiilin kari weydey, Ma afkaad ku hawl bixi cidlaad, ka hanjabaysaaye? Afartaa "Ha'da" intaan ka deyey, hirar ma qaadsiiyey, Caawana hiyiba waa hiyiye, hadal kalaan baanay; Hiinbaarsigii uma ekeyn, Habar MajeerteeneInkastoo habkay gobi lahayd, haddiyad loo siiyey "Hubso!" dhaha Hartigu waa ogyahay, haarihii Muduge.
Hiinraaca waa lagu yaqaan, hiihda doqoneedeBal inuu hanfade waalan yahay, hadi la'aantiisa, Hadmuu ku hirtay Cali Yuusufkuu, humay colaaddiisa? Ninna haybta kuma raaci karo, hooyo aa Igau dali aai, hayu dai, hayu dalan, wahuayo a la dhaline, hyoayo a, la dhaline! hele Reer Taleex, hiilki loo qabayeKu halligante lever toogadaad, dad u heshiiseeneWaataa shisheeyuhu hantiyey, ma-hudhadiiniiye.
Nabsaa ku haya hagardaamo gacal, hadimadeediiye, Inkastuu higgaad qabo haddaan, anigu soo haabtoWaxaw halis ah badaw hayjad galay, inu habaabaaye.
Xaajada badh baa la huwiyaa, huga la saaraayeHaasaawe uma eko’e wuu, hadadafaayaayeHullaxumada uunkoo hurduu, col u horseedaaye.
Hoosiisku waa qaadi jiray, belo hugmaysaayeWaa kaa hillaacii u baxay, haatufka ahaayeKol uun buu hilowluhu tumay, heello iyo jiibe.
Dadka kale tashiga waa hojaa, kay hadhaw noqoneWaxaanu hubsan Reer Cali-Gerow, haa dhowaan jirayeWaa waxa Wadaadkii ku hoday, Habar SaleebaaneIyagaa hoggaanka u ahaa, hororki waagiiye.
Halaakada markaad sheegatay, holakhadeeyaaneWaataad Bah Geri hoobideen, hanaddadoodiiyeKuwii boqorka heenseenayee, haafiyaad tahayeHiirtaad baddeen baa khalqigu, hiifayaa weliyeMaantalkana hannaankaad waddaan, waidea hanna.
Dabkaad hurin haben iyo dharaar, holaca aad oogiHalla kuma gureyside dadkaad, ku hawiraysaayeAduun baa hor Eebbiyo la tegi, holaci NaareedeIska hadhaye Aakhirana waa, lama huraankiiye.
Salaan Carrabay [Habar Jeclo]
Laaqsi gabay Salaanow adaan, layli ku ahaannin, Aan laaqin mooyee murtida, laaxin ka idleynninOo weli la liicliicayaad, rag isku laashaayeLur baad kororsataa iyo inaad, dacarta leeftaaye.
Adigoo aan laaqin u ahayn, kaygu waa lacageWaa laba-khasaar inaan murtida, kuu lisaa adiye, Hayeeshee sidii wax iga lumay, an ugu luuqeeyo.
Leyliga lixaad lihi haween waa, luggoyn jirayeHaddii aan raggii loodinayn, dumar ma liicshaaneLeeleesho gaaladu haddaanay, kugu lammaanaanninAdba ilama aad loollanteen, oo Lillaahiya’eLibna igaene Wallaad haysateen.
Jar inaad ka laallaadid oo, lulato mooyaaneLugba meel bannaan ma aad dhigteen, waana loo marageLadnaantuba waxay kuu ahayd, laba dharaaroodeGob liciifta waa la arki jiray, gunise waa liideLayaab ma leh hadqduu la nimaye wa.
Inkastoo la jaro geed haddaan, xididka loo siibinGoortuu biyaha laasimo buu, laamo bixiyaaye, Lugi faras ma gaadhiyo rakuub, tiirshey luquntiiyeLaacii ka baxa meel fog waa, lagu haya garamaaye kaaaneql laigui a caan.
Awal baan laguug badan ahaa, oo is wada leege, Haddii anigu aan liito oo, yarehe laadlaadoMeeshan iyo Luuq baa tolkay, ladani yaallaaye.
Liisaanka kaa yimid hadday, laydhu kor u qaaddoAy laliso wuxuu gaarayaa, qoon libaaxyo aheMar haddii Suldaankii labaad, soo lallabo weerarSidii laxam baruur iyo hilbaha, loo karshaad bai luminye, a adarkan sidu marii.
Aarkuba haddii wiilal didi, laysu dabo joojoMarka hore siduu deyrka jebin, ways dalliciyaayeDabadeed ninkuu dili naftay, kala dardaarmaane.
Markuu duubiweynow indhaha, dibadda soo joojoUu doorka laayoo ilkaha, darib u haanfiiro, Bal dayaay ninkii dalash ahaa, sooma daakhilo'e! Laba dibi dinnaahyayn ka siman, Docira-dahane isa-doors, Daafhaan, jeerey diriraane is wax-doors, Daafhaan, kaira-kaana, kaira-kaana, daadamane dambaa, mid is dalleenshaaye.
Haddii Daawad deyr loo dhigoo, baarqab lagu daayoUu dabar la soo dhaco midkay, kebaddu diifaysay, Bal dayaay markuu doobta rido, waa durduriyaaye!
Orgi door ah oo naag dir badan, ari ku sii deysay, Hadduu qabatan galo oo riyaha, qaylo kaga daadsho, Bal dayaay markuu geeska daro, waa durduriyaane!
Afartaasi waa gabayga dedan, dadabdhiggiisiiye; Warsangeliga caro daalisee, dibinta ruugaaya, Dirir hadduu maagana arlada, dubuq ka siinaaya, Bal dayaay dad buu ii xigaa, waana darafteeye!
Suldaan duub leh daaraha khatiman, badaha duunkoodaHawiyaha dabkiisii ​​sitee, dooni amarkiisa, Bal dayaay dad buu ii xiga, waana darafteeye!
Mareexaan haddaan wiil u diro, laysu soo durugyeOgaadeen dal dheer iyo wuxuu, webiga daanshoodoHadduu dirir xigaalkii ogyahay, igama daaleene.
Damta iyo dinnaagada horuu, kaa dul dhacayaayeAllaylehe inaan deynahayn, duunka kaa haraye, Haddii dalandal kaa fiigo waa, dooxanahayaaye.
Intaasoo isku dawladi anooy, dunida ii joogtoMarkaan Dabacayuunow arlada, nabad ku daaqsiiyay, Allaylehe inuu daawo furo, waa gun dalabkeede!
Ragga Cayn u kacayow war uun, Cali ha loo geeyo; Calaankii la guubaabin jiray, ciiradiis bogay dheh! Cidda Arab ah iyo Ciidagale, cuurka Habar Yoonis, Awalkaa ciriiriga u jira, ceelka Madarweyne laghekia dhan Ciid iyo intaa, Ceelo uga taallo, Isaxaaqa kebed ciirayoo, Caliyo Haaruun ah, Cabdulliyo Makaahiil, Bah-Geri, callan Mareexaan ah, Hartigaa cadceed idil degoo, curadka Daarood ah, Cishihii Bahoma waadeyraa , laga cataabaayeHaddii caaddilnimo loo warrami, ciirshe dunidiiye.
Waatay cibraan iyo noqdeen, ciidan xoog badane, Waatay carruurtiyo habluhu, la ciddijiideene, Waatay caddeystii gobtii, calaf ka yeesheene, Waatii biyaha ceelka iyo, cawska loo miyayeNimaan lo magan cadhiyaha dilo.
Haddaadse ciil ka bixi Xaajigii, kama carootaaneCiyaar sow shalay looma dilin, curaddadiinnii dheh! Calal miyey ka bixiyeen kuwii, Ina-Camey toogtey?